Orylọ ọrụ agba anyanwụ - China Solar Fences Manufacturers, Suppliers
3D Curved welded waya nsu na-ezo aka 3D welded waya nsu, 3D ngere obubọk, nche nsu. O yiri nke ahụ na ngwaahịa ọzọ M-udi welded waya nsu ma dị iche na ntupu spacing na elu ọgwụgwọ ruru dị iche iche ngwa. A na-ejikarị ogige a eme ihe na ụlọ obibi iji gbochie ndị mmadụ ịbanye n'ụlọ gị na-akpọghị.
M-kpaliri kpaliri welded ntupu ngere (One-mpempe Post) maka anyanwụ ugbo
Emebere M-welded waya ntupu nsu maka osisi anyanwụ / ugbo ala. N'ihi ya, a na-akpọkwa ya dị ka "ogige osisi mbara igwe". O yiri nke ahụ na ihe ọkụkụ nke anyanwụ ọzọ ma ọ na-eji mpempe akwụkwọ kama ịchekwa ego ma mee ka usoro ihe owuwu dị mfe.
Galvanized welded waya nsu maka ugbo na ulo oru ngwa
Ezubere welded waya nsu maka ezubere maka oru ngo a nwere oke mmefu ma choro ngba ike di elu. A na-eji ya eme ihe nke ukwuu na ọrụ ugbo na ụlọ ọrụ mmepụta ihe n'ihi oke ego ya.